Ny vondrom-piarahamonina SI LA misy foko etnik 54 any Vietnam - Tany masina amin'ny fianana Vietnam
Tizy SI LA koa no antsoina Cu De Xu ary Kha Pe. Mipetraka ao izy ireo Seo Hai ary Hamlet Si Thau Chai (Afaka Ho Commune) of Distrikan'i Muong Te in Lai Chau1 Province ary Nam Xin Hamlet (Kaominin'i Muong Toong) of Distrikan'i Muong Nhe of Dien Bien2 Province. Manana mponina manodidina ny 1,006 XNUMX izy ireo. Ny teny SI LA dia an'ny Tibeto-Bumnese3 vondrona.
Tizy SI LA mivelona amin'ny vary maina sy com. Vao tsy ela akory izay dia namboly vary tany anaty tanimbary izy ireo. Na dia mitana andraikitra lehibe aza ny fambolena, ny fihazana sy ny fanangonana dia manan-danja ihany koa amin'ny fiainany.
Tizy SI LA mipetraka amin'ny trano miorina amin'ny tany. Toerana afovoany no hita eo afovoan'ny trano. Miavaka tokoa ny akanjo vehivavy SI LA. Ny tapany ambony amin'ny akanjon'izy ireo dia misy loko hafa amin'ny ambiny ary voaravaka farantsa volafotsy sy alimo feno. Miovaova arakaraka ny taonany ny lohan'izy ireo. Ny zazavavy kely dia mitondra kitapo misy paosy mena hatrany. Taloha dia nisy lehilahy SI LA nandoko mena ny nifiny ary mainty ny vehivavy. Ankehitriny dia tsy hitan'ny tanora intsony io fomba io.
Tizy SI LA dia manana razambe maro fianakaviana. Ny fifandraisan'ny mpikambana ao amin'ny firazanana dia tena fatra. Ny lohan'ny tsipika no lehilahy zokiny indrindra izay mitana andraikitra lehibe eo amin'ireo mpikambana sy mpitsara miadidy ny libir anatiny, indrindra ny fanompoana. Ao amin'ny SI LA fiaraha-monina, ankoatry ny lohan'ny tsipika, ny mo (ny mpanao ody ratsy) hajain'ny rehetra.
ANy fomba amam-panao dia ankalazana amin'ny fomba roa ny mariazy mandritra ny herintaona. Amin'ny fombam-pivavahana faharoa, ny fianakavian'ilay mpampakatra dia tsy maintsy manome fanomezana mariazy ho an'ny fianakavian'ilay mpanambady alohan'ny hitondrana azy ireo mody.
It koa dia cjstomary fa ny fasana dia mitazona teti-dratsy any amin'ny farany ambany amin'ny faritra onenana, izay ametrahana ny fasan'ny mpikambana ao amin'ny razambe mitovy. Matetika ny SI LA dia manorina trano fandevenana alohan'ny handavahana ireo fasana.
Tny vatam-paty dia vita amin'ny vatan-kazo loaka. Tsy mitsidika ny fasana mihitsy izy ireo na mampifandray indray ny fatin'ireo maty fa ny zaza dia tsy maintsy misaona ny ray aman-dreniny ao anatin'ny telo taona.
Tizy SI LA mankalaza fombam-pivavahana maro, ny tena zava-dehibe dia ny fiankohofana amin'ny razana sy ny génie tutelary ao an-tanàna. Eo koa ny fombafomba mifandraika amin'ny fambolena.
Tny fiainan'ny SI LA dia nihatsara fatratra nefa ambany hatrany. Sahirana maro no aloany ary mila ny fanampiana avy amin'ny manampahefana izy ireo.
Tanànan'i SI LA any amin'ny faritanin'i Lai Chau (Loharano: Mpanonta VNA)
(Visited 1,182 fotoana, 1 fitsidihana amin'izao fotoana izao)
← Ny vondrom-piarahamonina NUNG misy vondrona foko 54 any Vietnam
Ny Vondron'olona SAN CHAY misy foko etnik 54 any Vietnam →
Comments Off amin'ny TAY NINH - Cochinchina
GOUJIAN: sabatra Sinoa fahiny izay manohitra ny fotoana (7,972)
NY ASAN'NY FIVORIANA ETHNIC 54 any VIETNAM - Fizarana 1
Comments Off momba ny Vondrom-piarahamonina GROUPS ETHNIKA 54 ao VIETNAM - Fizarana 1
Fitsidihana anio: 343
Andro farany 7 nitsidika: 2,318
Total visits: 420,569